mars 2019 – filazantsaramada
« Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. » (I Petera 4:2) Ny Fanahy Masina miasa ao ampontsika no mahatonga antsika hanana fo nofo, tsy ho mafy tahaka ny vato, ka mampahafantatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra. Fa hoy ny Soratra Masina: “Dia homeko fo iray izy, ary […]
Publié parfilazantsaramada mars 22, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur SAROBIDY NY FOTOANA
« Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin’izay ora izay. » (Matio 15:28b) Avy aiza ny finoan’ity vehivavy ity? Raha ny marina dia avy amin’izay ren’ny sofiny. Mety avy amin’izay efa hitan’ny masony koa…Fa ny lazain’ny Soratra Masina dia hoe: «Ny finoana dia avy amin’ny Toriteny, ary ny toriteny […]
Publié parfilazantsaramada mars 15, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur LEHIBE NY FINOANAO
« Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy. » (Isaia 55:11) Jesosy Ilay Teny tonga nofo, ary tsy niverina tany amin’ny Ray naniraka Azy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrany ary ambinina amin’izay ampandehanany Azy. Efa tanteraka tokoa […]
Publié parfilazantsaramada mars 8, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZY TSY MAINTSY MITOMBO
« Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbary; fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsiparifary teny amin’ny vary dia lasa nandeha. » (Matio 13:24-25) Fanoharana iray ny amin’ny fanjakan’ny lanitra ny famafazana voa tsara. Avy amin’Andriamanitra ny voa tsara. Mety Izy mihitsy no mamafy, mety […]
Publié parfilazantsaramada mars 4, 2019 mars 4, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANJAKAN’NY LANITRA